Soomaaliya: Wasiirka Gaashaandhigga iyo Taliyaha Ciidanka Xoogga oo is-casilay
Soomaaliya: Wasiirka difaaca iyo Taliyaha Ciidanka Xoogga oo is-casilay
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed, iyo Taliyihii Ciidanka Xoogga, Jeneraal Axmed Maxamed Jimcaale (Cirfiid), ayaa ka casilay xilalkoodii.
Wasiirka Warfaafinta Eng Cabdiraxmaan Yariisow, ayaa saxaafadda u xaqijiyay Is-casilaadda labadaasi mas'uulka, isagoo sababtuna ku sheegay arrimo u gaar ah.
Wuxuu sheegay Yariisow in Gollaha Wasiiradda ay ka aqbaleen Wasiirka Difaaca is-casilaadiisa, kadib kulankoodii maanta oo uu shir gudoomiyay Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka, Mahdi Maxamed Guuleed.
Wararka Warsidaha Garowe Online uu helay ayaa sheegay in Wasiirka uu isku casilay sababo kale oo wada-shaqeyn la'aan dhanka Ra'iisul Wasaaraha, oo aan kala tashan arrimaha quseeya howlaha loo igmaday Wasaaraddiisa.
Gollaha Wasiiradda ayaa Taliye Cirfiid, oo iscasilaadiisa u gudbiyay Madaxweyne Farmaajo, ku bedelay Sareeye Gaas Cabdiweli Jaamac Xuseen (Gorod).
Jeneraal Cirfiid sababta ka dambaysa Iscasilaadiisa waxay la xiriirtaa Dagaalkii Ciidamada Militariga iyo Nabad Sugida (NISA) ku dhexmaray Muqdisho bishii July, iyo duulaankii dhawaan Al shabaab ku qaadey Bariire, oo Askar badan lagu dilay.
Garowe Online ayaa fahansan in Wasiirka iyo Taliyaha, ay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre isku qabteen arrimo xasaasi ah, oo ay kamid yahay Mashaariicda dhaqaale ee dalalka Beesha caalamka iyo Hay'adaha kale siiyaan Ciidanka Xoogga.
Xogaha kale, ee GO soo gaarey ayaa sheegaya in Wasiirka iyo Yaliye Cirfiid aysan ka dhaxeyn wax wada-shaqeyn ah, sidaasi darteedna lagu qabsay labadooduba inay is-casilaan.
Ilo-wareedyo kale ayaa Garowe Online u sheegay in Dalalka Soomaaliya ka taageera dhinac dib u dhiska Ciidanka Qaranka iyo la dagaalanka Al shabaab ay mudo dheer ka cawanayay Wasiirka Difaaca iyo Taliyaha Ciidanka Xoogga.
Wasiirka ayaa waxay ku dhaliileen inuusan faham-saneyn, oo aqoon iyo qibradna u laheyn howlaha Ciidanka, halka Taliye Cirfiid-na uu ka dhega-adeegay isbedelka Ciidanka lagu sameynayo.
Shirka Gollaha Wasiiradda oo ka furmaya Baydhabo
Soomaliya 16.11.2017. 10:21
Shirka Gollaha Wasiirada Xukuumadda Soomaaliya, ayaa waxa uu maanta ka dhacayaa Baydhabo...
Soomaaliya: Jen Cirfiid oo booqday Ciidanka Bariire
Soomaliya 09.10.2017. 18:06
Baarlamaanka PL oo cod aqlabiyad leh ku ansixiyay xukuumada cusub
Puntland 16.02.2019. 13:56
Gollaha Wasiirada oo Shir gaar ah isagu yimid [Maxaa looga hadlay]
War Saxaafaded 14.11.2017. 22:57
Khayre oo Wasiirro cusub magacaabey [Akhri magacyadooda]
Soomaliya 07.04.2019. 12:40
Xukuumadda Somalia oo ansixisay Heshiiska Militeri ee Turkiga [Sawirro]
War Saxaafaded 14.02.2019. 17:49